Duraka Kura दुराका कुरा: August 2015
अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको सवाल
संस्कृति व्यापक र गहन विषय हो । संस्कृतिको अर्थ हामीले सामान्य अर्थमा बुझ्ने गरेको नाँचगान तथा झाँकीभन्दा बृहत छ । त्यसैले संस्कृतिलाई परिभाषित गर्न पनि त्यति सजिलो छैन । संस्कृतिको परिभाषालाई लिएर मानवशास्त्रीहरूबीच पर्याप्त मदभेद छन् । तर पनि मानिसले सिकेका तमाम मानवीय व्यवहारलाई संस्कृति भनेर धेरैले परिभाषा दिएका छन् ।
समाजशास्त्री एडवार्ड वी टेलर (सन् १८३२–१९१७) ले सन् १८७१ मा प्रकाशित पुस्तक ‘प्रिमिटिभ कल्चर’ मा संस्कृतिलाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा परिभाषित गरेका छन् । उनका अनुसार मानिसले समाजको सदस्यको नाताले आर्जन गर्ने ज्ञान, विश्वास, कला, कानुन, नैतिकता, प्रथा, सामर्थ्य र बानी–व्यहोराको समग्रता नै संस्कृति हो । उनले संस्कृतिलाई एउटा जटिल विषय ठानेका छन् ।
ज्ञान, अनुभव, मूल्य–मान्यता, मनोवृत्ति, धर्म, समयसम्बन्धी अवधारण, सामाजिक सम्बन्ध, व्रह्माण्डसम्बन्धी अवधारणा, व्यक्ति तथा समूहको स्वामित्वमा रहेको भौतिक वस्तु आदिको गठजोडलाई धेरैले संस्कृति मान्ने गरेका छन् ।
सभ्यताको लामो यात्रासँगै मानव संस्कृतिले सम्पदाको रूपधारण गरिसकेको छ । विश्व सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणबारे भएका प्रयासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा खासगरी प्रथम विश्वयुद्धको विभीषिका पछि यससम्बन्धी अवधारणा अस्तित्वमा आएको देखिन्छ । धिमाल (सन् २०१४) का अनुसार सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी बहस सन् १९२०/१९३० को दशकदेखि नै चलेको थियो ।
सन् १९६५ मा वासिङटन डीसीमा ‘विश्वसम्पदा ट्रष्ट’ स्थापना भयो । सन् १९७२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को सहयोगमा विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित भयो ।
सांस्कृतिक सम्पदालाई मूर्त र अमूर्त गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । कुनै कुनै सन्दर्भमा यसलाई भौतिक र अभौतिक सम्पदा भनेर पनि विभाजन गरेको पाइन्छ । डीबी आङबुङ लिम्बूले मानवशास्त्री डा. क्रिष्टिना अमेस्कुवालाई उध्रृत गर्दै मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको परिभाषा दिएका छन् ।
उनले भनेका छन् : ‘मूर्त सम्पदाले मानव सिर्जनाका भौतिक उत्पादनहरूलाई नै जनाउँछ, जुन एकपटक सिर्जना गरेपछि केही समयमात्र रहन्छ वा हस्तान्तरित हुँदैन । तिनीहरूलाई वर्तमान तथा भविष्यका सन्ततिहरूले उपयोग र आनन्दका लागि... बचाउन सकिन्छ । ती... विशेष सामाजिक–ऐतिहासिक चिनोहरू हुन् । यसले समयको प्रवाहसँगै हामीलाई अघि बढाउँछ ।... तर, यो अनन्तसम्म रहन सक्दैन ।’
डीबी आङबुङ लिम्बू लेख्छन्, ‘तुलनात्मक रूपमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा गतिशील हुन्छ र निरन्तर चलिरहन्छ । यो धेरै सन्ततिहरूसँगै विगतमा रहेजस्तै अहिले पनि जीवित रहन्छ । यो एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरित भइरहन्छ । यसको आफ्नै हस्तान्तरित हुने क्षमता वा गुण हुन्छ ।’ उनका अनुसार समय र परिस्थितिअनुसार यसमा परिवर्तन आइरहन्छ ।
मूर्त र अमूर्त संस्कृतिको एक सिक्काका दुई पाटाजस्तै हुन् । एउटाको अनुपस्थितिमा अर्कोको अस्तित्व असम्भवप्राय छ । अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षक र वहाक मानव मस्तिष्क र शरीर नै हु्न् ।
युनेस्कोले कुनै जाति वा समुदायका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका दायरा निर्धारण गरेका छन् ।
युनेस्कोका अनुसार मौखिक परम्परा तथा अभिव्यक्ति; अभिनय कला; सामाजिक व्यवहार, अनुष्ठान तथा चाडपर्वका उत्सव; प्रकृति तथा व्रह्माण्डसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा व्यवहार; र परम्परागत कलाकौशलहरू अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत पर्दछन् ।
युनेस्कोद्वारा जारी ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि, २००३’ ले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी प्रावधान अघि सारेको छ । ‘नेपालको राष्ट्रिय सास्कृति नीति, २०६७’ ले पनि अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको दिशामा बोलेको पाइन्छ । ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ को धारा १७ मा शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल कृषि युगबाट आधुनिकतातिर विस्तारै बामे सर्दै गरेको लोकजीवनप्रधान समाज हो । त्यसैले नेपाली समाजमा प्रकृति, कृषि र लोकजीवनका झलकहरू पर्याप्त भेटिन्छन्, जुन आफैंमा मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिका खानी हुन् ।
त्यसैगरी, नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले धनी मानिने जनजातिहरूको घर पनि हो । विविध सांस्कृतिक एवम् सामाजिक पृष्ठभूमि भएका जनजातिका संस्कृति र जीवनशैली असंख्य मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाबाट सिंगारिएका छन् । यी विविध सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सम्मिश्रण तथा गठजोडबाट नेपालको साझा संस्कृति बनेको छ । प्रत्येक जात वा समुदायमा विद्यमान सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण नभई नेपालको साझा संस्कृति मजबुद हुन सक्दैन ।
सांस्कृतिक दृष्टिले विविधतापूर्ण मुलुक भएकोले नेपालको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा वैभवशाली छ । यहाँका विविध भाषाभाषी, भौगोलिक क्षेत्र र सामाजिक पृष्ठभूमिका नागरिकका श्रुतिपरम्परा, चाडवाड, गीतसंगीत, अनुष्ठान एवम् कलाकौशलहरू बेहिसाब छन् । नेपालको हिमालदेखि तराइसम्मका प्रत्येक समुदायमा विद्यमान लोकविश्वास, रीतिरिवाज, चाडवाड, लोकगाथा, लोककथा, लोककथन, लोकधर्म, लोकमनोविज्ञान तथा लोकप्रहसन अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा हुन् ।
यसैगरी लोककला, लोकसंगीत, लोकनाटक, लोकमन्त्र, लोकपद्य, श्रुतिपरम्परा, परम्परागत खेल, परम्परागत ओखतीमूलो तथा उपचार विधि एवम् परम्परागत ज्ञान–सीप पनि अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत पर्छन् । सामान्यतया, यस्ता सम्पदाहरू एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा स्वस्फूर्त रूपमा हस्तान्तरण हुन्छन् । तर बढ्दो विश्वव्यापीकरणले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने क्रममा क्रमभङ्गता पैदा भएको छ ।
अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई देख्न वा छुन सकिँदैन । एकप्रकारले यिनीहरू कम्प्युटरका ‘सफ्टवेयर’ जस्तै हुन् । ‘सफ्टवेयर’ को अभावमा कम्प्युटर चल्न नसकेजस्तै अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाबिना हाम्रो सामाजिक जीवन चल्दैन । चले पनि निरस र एकलकाँटे हुन पुग्छ । त्यसले यिनीहरूको उचित संरक्षण हुन आवश्यक छ । बढ्दो विश्वव्यापीकरणसँगै अमेरिकी तथा पश्चिमा संस्कृति मौलाउँदै गएको वर्तमान पृष्ठभूमिमा हाम्रा रैथाने अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू दिनानु दिन जोखिममा पर्दै गएका छन् ।
हुन त, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा सधैँ तरल र गतिशील हुन्छ । यिनीहरू समयसँगै परिवर्तन भइरहन्छन् । यही कारण यिनीहरूको मौलिकता जोगाउन सहज छैन । तर यसो भन्दैमा संरक्षण कार्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सांस्कृतिक सम्पदाहरूसँग कुनै पनि समुदायको पहिचान जोडिएको हुन्छ । सांस्कृतिक सम्पदा हराउँदा त्यससँगै हाम्रो पहिचान पनि हराउँछ । पहिचान हराएपछि सम्बन्धित समुदायको अस्तित्व संकटमा पर्छ ।
दुनियाँ एक्काइसौं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको छ । देशमा लोकतन्त्रको बिहानी झुल्किसकेको छ । तर पनि शासन–सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूको सांस्कृतिक चेत राम्रोसँग खुलिसकेको छैन । उनीहरूले नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई दिलदार बनेर कख्याउन सकेका छैनन् । यसबाट विविधतापूर्ण नेपाली समाजको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाले नजानिँदो किसिमले अभिभावकत्व गुमाइरहेका छन् ।
अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदामा समयको पदचाप भेटिने, स्थानीय जीवनशैलीको छायाँछवि देखिने र समाजको सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पाइने भएकाले यिनीहरूको संरक्षण आवश्यक हुन्छ ।
देशको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने दिशामा शासन–सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू उदार बन्नैपर्छ । देशको सांस्कृतिक विविधता सबैको साझा सम्पत्ति हुन् भन्ने तथ्यलाई सत्तासीन र नीतिनिर्माताहरुले आत्मासात नगरेसम्म सांस्कृतिक सम्पदाको उचित संरक्षण हुन सक्दैन ।
देशको सांस्कृतिक विविधताप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण सफा हुनैपर्छ । यसप्रति उनीहरू उदार हुनेबित्तिकै समाजको ‘सफ्टवेयर’ मानिएको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको ढोका खुल्दछ । सत्तामा रहेकाहरू उदारमना भएमा र ‘ग्रासरूट’ मा रहेका नागरिक सक्रिय भएमा यसलाई धेरै हदसम्म जोगाउन सम्भव छ ।
धिमाल, सोम । २०१४ (अक्टोबर २४) । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा र आदिवासी जनजातिका सवालहरू । ब्लग पोष्ट । अगष्ट २, २०१५ मा अध्ययन गरिएको ।
लिम्बू आङ्बुङ, डीबी । (२०७१) । लिम्बू जातिको अर्मूत सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण । तान्छोप्पा २० (३) । ललितपुर : किरात याक्थुम चुम्लुङ ।
What is Culture? (n.d.). Retrieved on August 2, 2015, from
What is Intangible Cultural Heritage? (n.d.). Retrieved on August 2, 2015, form UNESCO, http://www.unesco.org/services/documentation/archives/multimedia/?id_page=13&PHPSESSID=cdf1c1b605ebc498950fa399d2ed8658
[साभार : हिमाली आवाज (साउन २१, २०७२, पृ.२, वर्ष ३३, अंक ३) ]
Posted by दुराका कुरा at 7:13 PM No comments:
Labels: अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा
कस्तो लेखाइ राम्रो ?
‘लेखन कठिन काम हो । पाठकको ध्यान खिच्ने गरी लेख्नु र त्यसलाई पछिसम्म कायम राखिराख्नु गाह्रो काम हो ।’ सन् १९३४ मा जन्मिएका चर्चित अमेरिकी अभिनेता तथा निर्देशक डेभिड स्टाइर्जको यो भनाइले मसीजीवीहरूले भोगिरहेका जटिलतालाई धेरै हदसम्म उजागर गरेको छ । राम्रो लेख्ने काम साँच्चै असजिलो र चुनौतीपूर्ण छ । यो सबैले स्वीकारेको कुरा हो ।
राम्रो कसरी लेख्ने ? यो लेख्न चाहनेहरूका मनमा उब्जिरहने प्रश्न हो । यसको कुनै सहज उत्तर छैन । राम्रो कसरी लेख्ने भन्नेबारे धेरैले धेरैथरि राय–सुझाव दिन सक्छन् । यसबारे धेरै राम्रा र अनुभवी लेखकहरूले आफ्नै अनुभवहरू पोख्न सक्छन् ।
कसैले भन्लान्, ‘अध्ययनशील बन्नुपर्छ ।’ कसैको मत हुनसक्छ, ‘नियमित लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ ।’ कसैले सुझाउलान्, ‘कहलिएका लेखकहरूका शैली अनुशरण गर्नुपर्छ ।’ कसैको राय हुनसक्छ, ‘लेखाइ सरल र बोधगम्य हुनुपर्छ ।’
कुरा सही हुँदाहुँदै पनि यी राय–सुझाव हरेक व्यक्तिका लागि अचुक अस्त्र बन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । राम्रो लेख्ने त्यति सहज छैन । लेखनका धेरै आयाम र पाटा भएकाले तिनको विवेचना नगरी कसरी राम्रो लेख्ने भन्नेबारे गणितीय सूत्रजस्तो गरी सुझाउन कठिन छ ।
राम्रो लेखनबारे व्यक्त भएका राय–सुझावबारे एकपटक विचार–विमर्श गरौं ।
राम्रो लेखनका लागि अध्ययन आवश्यक छ । त्यसमा विवाद छैन । त्यसैले लेख्न चाहने व्यक्ति अध्ययनशील बन्न आवश्यक छ । तर हरेक अध्ययनशील व्यक्ति राम्रो लेखक बन्छ नै भन्न सकिन्न । अध्ययनशील व्यक्ति कुशल वक्ता वा व्याख्याता बन्न सक्ला । तर एउटा कुशल व्याख्याता कलमबाज बन्छ भनेर घोषणा गर्न सकिन्न । भाषणबाज् हुनु र कलमबाज हुनु एक अर्थमा फरक कुरा हुन् । न सबै भाषणबाज कलमबाज हुन सक्छन्, न त सबै कलमबाज भाषणबाज भएर निस्कन्छन् ।
लेखनलाई धारिलो बनाउन नियमित अभ्यास आवश्यक छ । तर पनि दिनहुँजसो लेख्ने हरेक व्यक्ति राम्रो लेखक बन्छ भनेर किटान गर्न सकिन्न । दिनहुँ लेख्ने व्यक्ति राम्रो टिपोटकर्ता वा अभिलेखकर्ता बन्नसक्ला । दुनियाँमा हरेक दिन केही केही न लेख्ने व्यक्ति छन् । कतिले दिनहुँ कलात्मक किसिमले डायरी लेख्छन् । पत्रकारहरूले दिनहुँ समाचार लेख्छन् । तर पनि उनीहरू लेखक बनिहाल्छ भन्न गाह्रो छ । नियमित अभ्यासबाट कुनै व्यक्ति लेखाइको प्राविधक पक्षबारे जानकार हुनसक्छ तर यत्तिमै उसमा तिलस्मी लेखकीय गुणले बास गर्छ गरिहाल्छ भन्न सकिन्न । लेखन नितान्त प्राविधिक कुरा मात्र होइन, यो त लेख्ने व्यक्तिको शिल्प र शैलीबाट जन्मने करामत पनि हो ।
कहलिएका लेखकहरूका शैली अनुशरण गरेर त्यसलाई आफ्नो मौलिकताले सिंगार्नु नराम्रो होइन । भनाइ नै छ, ‘साहित्य नक्कलको पनि नक्कल हो’ । हाम्रो लेखाइ कुनै न कुनै रूपमा अरूबाट प्रभावित भएकै हुन्छ ।
यस प्रसंगमा समीक्षक हरि अधिकारी लेख्छन्, ‘...साहित्य र कलामा सर्वथा मौलिक भन्ने कुरा केही हुँदैन । कला र साहित्य लगातार दोहोरिइरहन्छ । तर, प्रतिभाशाली लेखक कलाकारहरूले आफ्ना कृतिलाई यस्तो ढङ्गमा चिरिच्याँट पारेर प्रस्तुत गरेका हुन्छन्, पारखी पाठकका मनमा ती कृति, नूतन, नवीन, मौलिक अदभूत हुन् भन्ने भ्रम पर्छ । त्यस्ता छली जादुगरहरू ठूला कलाकार वा लेखक मानिन्छन्’ (अन्नपूर्ण पोष्ट, असोज १२, २०७०, पृ.६) ।
यसको अर्थ निर्लज्ज किसिमले अरूका कृतिको अन्तरवस्तुलाई आफ्नो बनाउने वा अरूको कृतिको शीर्षकलाई यताउति पारेर आफ्नो कृतिको शीर्षक बनाउने भन्नेचाहिँ कदापि होइन । ‘नक्कल गर्न पनि अक्कल चाहिन्छ’ भन्ने भनाइ यस मामलामा सतप्रतिशत लागू हुन्छ । अरूबाट प्रभावित हुँदै आफ्नो लेखाइमा मौलिकताको पाइन चढाउने काम सहज छैन ।
धेरैको सुझाव हुन्छ, ‘लेखाइ सरल र बोधगम्य हुनुपर्छ ।’ कुरा हो पनि । लेखाइ सरल र बोधगम्य भएमा पाठकले लेखकले भन्न खोजेका कुरा सहजै र छर्लङ्ग बुझ्न सक्छन् । यही भएर पत्रकारिताका विद्यार्थीहरूलाई सरल लेख्न सिकाइन्छ । तर सरल किसिमले लेख्नु नितान्त कठिन काम हो । अमेरिकी उपन्यासकार नथाइलन हथोन (सन् १८०४–१८६४) ले भनेका छन्, ‘इजी रिडिङ एज ड्याम हार्ड राइटिङ’ (सजिलै पढ्न सकिने गरी लेख्नु नितान्त कठिन काम हो ) । अर्को कुरा, सरल लेखाइको आफ्नै ‘साइड इफेक्ट’ पनि छ । सरल लेखाइ बोधगम्य हुन्छ तर यसले पाठकलाई लालित्य र मादकता दिन्छ भन्न सकिन्न । लालित्य खोज्नेहरूले सरल लेखाइ मन नपराउन सक्छन् ।
माथि चर्चा गरिएका सबै गुणको गठजोड लेखकमा भरिएमा ऊ लेखक बन्नसक्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि ऊ राम्रो र लोकप्रिय लेखक बन्न सक्छ भनेर अझै पनि भन्न सकिन्न । त्यसमा पनि ऊ सर्वग्राह्य लेखक बन्छ भन्न त अझ कठिन हुन्छ ।
कसै कसैले आडम्बरपूर्ण शब्दको प्रयोग र शब्दचातुर्यलाई राम्रो लेखाइ ठान्छन् । यो पनि मसीजीवीमा रहेको एउटा ठूलो भ्रम हो । उसलाई लाग्ला, ‘मैले के के न लेखेँ ।’ तर त्यो लेखकभित्र चुलिएको आत्मारतिको पहाडभन्दा बढी केही होइन । यसबारे महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा (वि. सं.१९६६–२०१६) ले ‘लक्ष्मी निबन्धसंग्रह’ मार्फत् मुख खोलिसकेका छन् : ‘शब्दचातुर्य नै साहित्य हो भन्नेलाई म जवाफ दिन सक्तिनँ’ (पृ.४) । उनको आशय छ, आफूलाई ‘म पनि कम्तिको लेखक होइन’ भन्ने भावका साथ कृत्रिम प्रयासबाट चमत्कार निकाल्न खोज्दा सचेत प्रयास पग्लिएर जान्छ ।
लेखाइमा सहज भाव अभिव्यक्तिमाथि जोड दिँदै देवकोटा लेख्छन्, ‘राम्रो बनाउने सचेत भावले मनुष्यको कला बिग्रन्छ । म नै तीन मासाको छैन; तीन तोलाको अलङ्गकारले के भनूँ ! अलङ्गकार चन्द्रोदयका नियमानुसार कविता लेखी, सिंगारी–पटारी राम्रो बन्ने सचेत अनुकरणबाट सौन्दर्य निकाल्ने मेरो निमित्त रद्दी लेखनदास हुन् ।...मैले आफ्नो व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्न खुर्सानीको माला लाउनु पर्दैन; प्राकृतिक भावले चले मेरो सच्चा रूप निक्लिहाल्छ ।...अप्राकृतिक भएर कुरा गर्नेभन्दा सोझो सफा दिल मजाको हो’ (पृ.४–५) । यहाँनेर पनि प्रश्न उठ्छ, के त्यसो भए लालित्य र अलङ्कार बिना नै साहित्य जम्छ त ?
कसैले ‘शैली’ लाई राम्रो लेखाइको कारक तत्व मानेका छन् । यो कुरा धेरै हदसम्म सही हो पनि । तर यसमा पनि महाकवि देवकोटा सहमत देखिन्नन् । उनले शैलीलाई भन्दा पनि लेखकीय स्वच्छन्दतालाई प्राथमिकता दिएका छन् । देवकोटा लेख्छन्, ‘शैलीमा विश्वास गर्नेसँग मेरो बिन्ती यत्ति कि म कुनै शैलीका निमित्त लेख्तिनँ, लेख्तछु त केवल लेख्नका निम्ति र विचार भावहरूलाई सकभर सच्चा प्रकाशन गर्नका निमित्त प्राकृतिक तबरले जस्तो विषयमा जसरी मन डुल्यो, जस्तो झल्काझल्की फेला पर्‍यो, उस्तै लेखिदिन्छु (पृ.४) ।
लेखाइमा प्रभाव पार्ने अर्को कुरा पनि छ । त्यो हो, समय । यसबारे त्यतिविधि चर्चा सुनिँदैन । तर पनि समयको उर्वरतामा पनि लेखाइ निर्भर रहन्छ । उर्वर समयमा लेखिएका कृति लेखक र पाठक दुवैलाई चित्तबुझ्दो हुन्छ भने रुखो समयमा लेखिएका कृति लेखक र पाठकका लागि मनमोहिनी नहुन सक्छ । रुखो समयमा लेखिएका कृतिमा लेखक स्वयंले चित्त नबुझाएर फोहोरको टोकरीमा फालिएका दृष्टान्त पनि छन् । राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, लेखक नारायण ढकाललगायतका नाम चलेका साहित्यकारले आफ्ना केही कृतिहरू आफैंलाई चित्त नबुझेकाले च्यातेर फ्याँकेका प्रसंग पनि साहित्यिक यदाकदा वृत्तमा सुन्न पाइन्छ ।
लेखनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो पाठक हो । सन्तान थरि थरिका भनेझैं पाठक थरि थरिका छन्, जुन स्वभाविक हो । एउटै शैलीको लेखाइ सबै पाठकका लागि उत्तिकै रुचिकर नहुन सक्छ । फरक फरक पाठकले फरक फरक उद्देश्य परिपूर्तिका पढ्छन् । कसैले जानकारी प्राप्तिका लागि पढ्छन् भने कसैले अलङकार र लालित्यको रसास्वादनका लागि पढ्छन् ।
जानकारीका लागि मात्र पढ्नेले अलङकार र लालित्य मन नपराउन सक्छन् भने अलङकार र लालित्यमा डुब्ने पाठकले जानकारीमूलक सरल लेखाइ मन नपराउन सक्छन् । तर सबै सरल लेखाइ रुचिकर हुन्न भन्न पनि सकिन्न । अमेरिकी लेखक तथा पत्रकार अर्निष्ट हेमिङवे (सन् १८९९–१९६१) को उपन्यास ‘द ओल्ड म्यान एण्ड द सी’ सरल भाषामा लेखिएको विश्वको उत्कृष्ट कृतिमध्ये एक मानिन्छ ।
एक अर्थमा राम्रो लेखाइ असजिलो ओछ्यानजस्तै हो, जता कोल्टो फेरे पनि ज्यानले सुख नपाउने ।
के लेख्ने भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । समाचार, लेख, कथा, कविता, उपन्यास, हाइकु, संस्मरण, गैरआख्यानमूलक पुस्तक, ‘रिसर्च आर्टिकल’ के लेख्ने ? यी विविध विषय र विधाले लेखाइको शैली र विधि निर्धारण गर्छन् । यी सबैमा एउटै व्यक्तिको पकड र दक्षता नहुन पनि सक्छ ।
माथि नै भनियो, राम्रो लेख्नका लागि कुनै गणितीय सूत्र छैन । तर पनि अध्ययनशील हुनु, भाषामा राम्रो पकड राख्नु, आफूले लेख्न लागेको विषयमा गहिरो अनुशीलन गर्नु, नियमित लेख्ने अभ्यास गर्नु एवम् राम्रा लेखकको शैलीलाई रचनात्मक ढङ्गले अनुकरण गर्नु राम्रो लेख्नका लागि आवश्यक पक्षहरू हुन् । लेखकको नशामा दौडिरहेको जन्मजात लेखकीय गुण अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, जुन सबैमा हँदैन । लेखाइलाई अझ जादुमय र सुस्वादु बनाउन अरू अलौकिक तागत पनि चाहिन्छ, जुन लेखकहरू निरन्तर खोजीमा छन् तर सजिलै भेटिरहेका छैनन् ।
सन् १९३१ मा जन्मेकी अमेरिकी उपन्यासकार, सम्पादक तथा प्राध्यापक टोनी मोरिसनले भनेकी छिन्, ‘यदि तिमीलाई कुनै किताब पढ्न मन छ तर त्यस्तो किताब अहिलेसम्म लेखिएको छैन भन्ने लाग्छ भने लेख्न शुरु गर।’ उनको यो भनाइ राम्रो लेख्न चाहनेहरूका लागि प्रेरणास्रोत बन्नसक्छ । पहरा रसाएजस्तै गरी शिर्जनशीलता रसाएका लेखकहरूका लागि टोनी मोरिसनको भनाइले गुरुमन्त्रको काम गर्नसक्छ ।
[साभार : राजधानी (साउन १६, २०७२)। ग्राफिक्स : गुगल ।]
Posted by दुराका कुरा at 8:47 AM No comments:
Labels: लेखन कला